Umshado yiholide elikhethekile, ukuzalwa komndeni omusha ngakho-ke kugujwa njalo ngonyaka. Uma lolo suku luyindilinga, ngokuvamile abantu abaningi bamenywa emkhosini, kungenjalo usuku lomshado lugujwa kumbuthano omncane noma ngokujwayelekile ngabantu ababili. Isikhumbuzo ngasinye sinegama layo. Isibonelo, usuku lomshado lubizwa ngokuthi umshado ohlaza okwedlulele, futhi ngemva konyaka abashadile bavuma ukuhalalisela ngomshado wekotini. Ngezinye izikhathi kuthiwa yi-gauze.
Igama liyisendulo, elihlobene namasiko athile. Ngonyaka wokuqala empilweni yomndeni omncane kunzima kakhulu, singasho ukuthi lesi yisikhathi sokuhlola izingane, isikhathi sokwakhiwa komndeni omusha. Kulo nyaka abashadayo basanda nje ukujwayela abalingiswa, bayazana kangcono futhi hhayi yonke imibhangqwana ikwazi ukuhlala kulo nyaka ngaphandle kwezinyembezi nokuphikisana.
Umlilo emindenini yomndeni uvele uphazamise futhi usenamandla kakhulu, ngakho-ke ngisho nezinkinga ezincane zingabhubhisa umndeni omusha. Emzimbeni womndeni awuqedwa, lo mbhangqwana kumele ufunde ukunikezana, uxhasane esimweni esinzima.
Mhlawumbe akubona wonke umuntu owaziyo ukuthi ukuhalalisela kufanele kudunyiswe kanjani ngomshado wekotini futhi kuvelaphi leli gama? Ukugubha usuku lokuqala lokuphila okuhlangene kuqhathaniswa ne-chintz, ngokusobala ngoba ukotini luyindaba elula futhi enobuthakathaka kakhulu, njengobungane phakathi kwabashade. Umkhosi wokuqala womshado ubizwa ngokuthi i-calico, futhi ngoba ubuhlobo phakathi kwabancane abugcini nje buthakathaka futhi buthakathaka, kodwa futhi buyathandeka, ngoba imizwa ingakabikho futhi igcwele imibala ekhanyayo, njenge-chintz. Ngakho-ke, isikhathi sokudala, kwakuyisiko kubantu abasha ukunikeza iseluleko esihle ngalolu suku ukuqinisa umndeni nokugcina ubudlelwane obuqotho iminyaka eminingi.
Umkhosi womshado - leli holide lijabule kakhulu kuneliluhlaza, ngakho ukuhalalisela kungabi nje kuphela okuhlakaniphile, kodwa futhi kumnandi. Siyakuhalalisela ngokujulile ngomshado wekotini kungabhalwa ekhadini leposi noma ucezu lwephepha, futhi kuthunyelwe nge-SMS.
Ngokwesiko, ibhodlela le-champagne lavulwa ngomshado wekotini , okwakushiywa ngokukhethekile kule njongo kusukela ngosuku lomshado. Kuze kube yilolu suku, amanye amasiko nemikhuba ehlobene nalolu suku nayo iyenzeka, isibonelo, ukushintshaniswa kwabashadile ngezingodo. Emaceleni amakhono, indoda nomfazi babopha amafindo futhi bafunga omunye nomunye ngobuqotho nangothando. Emva kwalokho, amashekhi afihliwe endaweni ephephile futhi agcinwe lapho kuze kube sekupheleni kwezinsuku futhi uma konke kwenziwa ngendlela efanele, bakholwa ukuthi umndeni uzoba nobungane futhi ujabule. Futhi ezinsukwini zakudala umfazi osemusha kwakufanele agobe isango lomkhonto wakhe, futhi yena uqobo lwakhe, lapho ezohlangana nezivakashi futhi wamukele ukuhalalisela ngomshado wekotini. Umfati osemusha kwakudingeka ahambe kulolu hlobo lokugqoka usuku lonke kuze kuhlwe.
Ngesikhathi sokugubha, abazali, izihlobo nabangane abangcono kakhulu babizwa ngokuthi, abalungele ukuhalalisela kuphela owesifazane osemusha ngomshado wekotini, kodwa futhi nezipho. Ngokuvamile, labo abasanda kushada banikezwa ukotini noma umbhede wezinkinobho ngalolu suku. Kodwa unganika indwangu yetafula yelineni, amakhetheni noma amathawula. ERussia, umkakhe wayevame ukunikezwa ngengubo yekotoni, namabhantshi akhe omyeni noma ihembe. Kwakuyisibonelo sokuthi ubuhlobo phakathi kwabo manje buba nsuku zonke - calico.
Uma umkhosi wokugubha usuku lokuqala kungukuzalwa komndeni, khona-ke i-twenty-first iyinhlangano yalo esemthethweni. Emshadweni we-opal kuyisiko ukunikeza ubucwebe ngaleli tshe, futhi kuyisiko lokungahle lihlele iholidi elikhulu ngalolu suku, kodwa kunalokho, ukuhalalisela ngomshado wama-21 womshado womshado ovame ukuthatha ngocingo noma ngeposi. Phakathi nalesi sikhathi, izingane sezivele sezikhulile, shiya ikhaya lomzali futhi ziqale ukuthatha izinyathelo ezizimele empilweni, ukuze zifune izindlela zazo.
Ngakho-ke, umshado opal isisusa esisha esitholwa ngabashadile futhi kungenzeka ukuthi phakathi nalesi sikhathi uthando luzoqhuma ngamandla.
Indlela yokwenza ihembe aphume iphepha: kwalokho yokuqala esikhathini samanje
Izinhlobo ukukhwabanisa ukhetho. okuvezwa Ukhetho